Featured Blog Posts – January 2012 Archive (21)
सोपा, पिपा, ट्वीटर र बाबुरामको सरकार
अमेरिकी सीनेटमा एकबर्ष अगाडि नै सिनेटर प्रतिक लिहीले दर्ता गरेको बौद्धिक सम्पत्ति जगेर्ना सम्बन्धि कानून Protect Intellectual Property Act (PIPA) तथा ४ महिना अगाडि छलफलमा आएको उस्तै खाले अर्को कानूनी मस्यौदा अनलाइन मार्फत हुने चोरी तथा नक्कली कार्य नियन्त्रण Stop Online Piracy Act (SOPA) निर्णयमा पुग्नु अगाडि नै तुहियो । यही जनवरीको तेश्रो साता बहुमत सिनेटले सोपा र पिपाको बिपक्षमा उठेका सम्पुर्ण सवालहरु सम्बोधन…
Added by Binaya Shekhar on January 31, 2012 at 6:30pm —4Comments
चुनढुङ्गा उत्खनन बिवाद खोल्नुपर्छ: शक्तिकेन्द्र, खोल्न दिन्नौं: स्थानीयवासी
हरिप्रसाद भुसाल, अर्घाखाँची माघ १५
भन्ने गरिन्थ्यो, राजनीतिक पार्टीहरु जनता प्रति वफादार हुन्छन् । जनताको समस्या नै उाीहरुको समस्या हो । जनताको खुसीमा नै पार्टी र पार्टीका नेताहरु खुसी हुन्छन् ।
तर अर्घाखाँची जिल्लामा यो सिद्धान्त फ्लप खाएको छ । यहाँका राजनीतिक पार्टीका केही नेताहरु देश र जनता प्रति बफादार नभइ मालिकहरुको पछाडी लागेको खुलाषा भएको छ । हजारौं स्थानीय जनताहरुले आफुहरुको बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने सम्भावना बलियो भएको भन्दै चुनढुङ्गा उत्खनन रोक्का गर्न माग…
Added by अर्घाखाँची न्यूज on January 30, 2012 at 5:30pm — No Comments
बन्दले उपत्यका ठप्प: कसैलाइ पर्व, कसैलाइ कष्ट
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मुल्यवृद्धिको विरोधमा विद्यार्थीहरु प्रर्दशनमा उत्रिए तर राजधानी काठमाण्डौँका धेरैले भने यसलाइ पर्व झैँ मनाए । प्राय कार्यलय तथा शिक्षण संस्था र पसलहरु बन्द भएपछि घरमै बस्न बाध्य भएका अधिकांशले परिवार सँग त समय बिताए नै धेरैलाइ पर्व झैँ भयो ।
अस्पतालका बिरामी कुरुवा तथा विभिन्न नगइ नहुने काममा जानुपर्नेहरुले भने बन्दमा दुख पाए । यद्यपी बन्दले…
Added by Manoj Satyal on January 29, 2012 at 7:00pm — 1 Comment
ब्लग: सूचना, सोख र आम्दानी
ब्लगिङ अब सोखको विषयमात्र रहेन । अहिले ब्लगिङबाटै राम्रो आम्दानी गर्नेहरुको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । पहिले सोखले ब्लगिङ गर्न शुरु गर्नेहरु पनि अहिले कमाउन थालेका छन् । समृद्धि फाउण्डेसनमा रिसर्च एशोसिएट पदमा काम गरिरहेका सुरथ गिरी त्यसका एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । केही लेख्ने हुटहुटीले घच्घच्याएर ब्लगिङ शुरु गरेका गिरी अहिले महिनामा झण्डै ४ हजार रुपैयाँ ब्लगिङबाट कमाउँछन् । ‘म ब्लगिङमा त्यति सक्रिय छैन । सक्रिय ब्लगरहरुले महिनामा १० देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछन्,’ उनी भन्छन् । हेम आचार्यको…
Added by Modnath Dhakal on January 29, 2012 at 5:00pm —2Comments
जनआन्दोलनका घाइतेमा समर्पित प्रतिष्ठान
बनेपा, माघ १४ । दोस्रो जनआन्दोलन ०६२÷०६३ का घाइते मुकेश कायस्थलाई समर्पण गर्दै एक प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको छ । काभ्रेका स्थानीय समुदायको अग्रसरतामा प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो ।
मुकेशलाई जिउँदो सहिद घोषणा गर्नुपर्ने मागसहित जनआन्दोलनपछिका प्रत्येक सरकार प्रम्खलाई कायस्थ परिवारले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएको…
Added by MadhuSudhan Guragain on January 29, 2012 at 5:52am — No Comments
सधैं डायरी लुकाउने
जनतालाइ धेरै सूचना दिनुपर्दैन भन्यो सरकारले। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,२०६४,दफा ३,उपदफा ३ले सार्वभौमसत्ता,राष्ट्रिय अखण्डता,राष्ट्रिय सुरक्षा,सार्वजनिक शान्तिसुब्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने बिषय र अपराध अनुसन्धानमा असर पार्ने बिषयमा सूचनाको हकलाइ ब्यवस्थित गर्न सकिने छ भनेको छ। यी बिषयबाहेक वाँकि सवै बिषयमा सर्वसाधारणले निर्वाध रुपमा सूचना प्राप्त गर्न सक्छन्। यतिविधि सूचना यी जनतालाइ किन चाहियो,धेरै भयो भनेर उपरोक्त ६ बिषयका अतिरिक्त थप धेरै बिषयमा सरकारले सूचनामा वन्देज…
Added by Ananda Ram Paudel on January 29, 2012 at 12:30am — No Comments
अपरेसन हन्टले छुन नसकेको यौन व्यापार
कोहलपुर– धेरैको चासो र चिन्ता बनेको बा“केको शान्ति सुरक्षालाई मजबुद पार्न पछिल्लो समयमा बा“के प्रहरीले अभियानकै रुपमा थालनी गरेको अपरेसन हन्टले सफलता पाउ“दै गरेको सर्वत्र महशुस गरेको पाइएको छ ।
भूमिगत संगठनहरुको बढि चलखेल हुने जिल्ला भनेर चिनिने बा“केमा प्रहरीले बढाएको सक्रियताले उल्लेख्य मात्रामा शान्ति सुरक्षाको स्थितीमा सुधार आएको आम नागरिले बताउने गरेका छन् । तर प्रहरीको अपरेसन हन्टले कोहलपुरमा हुने अवैध देह व्यापारलाई छुन नसकेको पाइएको छ ।
हाम्रो विश्वस्त स्रोतका अनुसार…
Added by Humhari Bhattarai on January 28, 2012 at 2:00pm — No Comments
आजकाल बजाराँ धेरै चिजको बिरोध भैरा सुनिन्छ । एकमनले त लाग्छ, मान्छेहरुको कामै छैन कि क्या हो ? जतिखेर नि बिरोध गर्याछन, टायर बाल्याछन, नेपाल बन्द गर्याछन । नेपाल नयाँ भैसक्यो, पुरानाका ठाउँमा नयाँ कती हो कती राजा आइसके, मान्छेहरु जाबो ४७ सालतिरकै जस्तो पुरानो बिरोध गर्छन् । मैले एउटा कुरो बुझ्नै सक्याछैन कतीसम्म चाँही बिरोध गर्न सक्याहुन यार ? देश र जनताको लागि गरिएका कुनै पनि काममा कसैको सहयोग र समर्थन छैन, अनी के देश…
Added by JawKnockRaazaa on January 23, 2012 at 11:30am —2Comments
दिवंगत दुई छोराको सपना साकार पार्न समाजसेवा
बनेपा, माघ ८ । भनिन्छ, मातृवात्सल्यसँग जोडिएको ‘नौ महिना’ भन्ने शब्दले महिलालाई चरम सुख दिन्छ । काभ्रे कोशीपारी, धुसेनी शिवालयकी एक आमाको लागि भने यो शब्द जीवनभर नभुल्ने घाउ बन्नेको छ । लक्ष्मी गौतम तिनै महिला हुन्, जसले नौ महिनाको बीचमा दुई होनहार छोरालाई सडक दुर्घटनामा गुमाइन् । यतिखेर उनीसहित परिवारका सबै सदस्य छोराहरुको इच्छा पूरा गर्नकै लागि…
Added by MadhuSudhan Guragain on January 23, 2012 at 9:30am —2Comments
प्रवासमा नेपाली संस्कृति
युरोप,अमेरिका,अस्ट्रेलियामा बसोवास गरेका नेपालीहरुको बिषयमा अमेरिकामै रहनुभएका एकजना नेपालीसँग च्याटमा सम्वाद गरिरहँदा आफ्नै देशभित्र पढालेखा वर्गमा युरोप, अमेरिकाप्रतिको आकर्षण,ब्यग्रता र स्टेटसिम्बल झलक्क सम्झें। १०-१२ बर्षयता नेपालमा प्लस टू सक्दै गरेको किशोरको दिमागमा अमेरिका,यूरोप वा अस्ट्रेलिया नै हुन्छ। त्यहाँ जान के-के रिक्वायर्मेण्ट पूरा गर्नुपर्छ, त्यस्को तैयारीसमेत् शुरू गरिसकेको हुन्छ। देशभित्रै केही…
Added by Ananda Ram Paudel on January 22, 2012 at 11:30pm — No Comments
दलित समुदाय भन्छ: थुक्क ! नेपाली मिडिया
यो सत्तोश्राप मैले व्यक्तिगत आधारमा गरेको होइन । जातले टपरे बाहुनको खाँटी सन्तान हुँ । सायद, यो समाजको दृष्टिमा विटुलिइसकेँ हुँला । तर, छातिमाथि हात राखेर सत्यलाई ढाँट्न सक्दिन । अन्याय न त हेर्छु, नत सहन्छु । बोल्छु, चिथोर्छु । दाह्रा किट्छु । यहाँ लेखेर अन्यायका विरुद्ध शब्द विद्रोह बोलें । कसैप्रति दुखेमा जानाजान गरेको गल्ति हो मेरो ।
इतिहास पल्टाएर हेर, कानुनका ठेलीहरूमा खोज, धर्मग्रन्थका कुरूप मन्त्रहरू पढ र समाजमा हुनेखाने वर्गहरूको दैनिक जीवनमा हेर । कल्ले कुचेको छैन दलितहरूको…
Added by shiva gyawali Bankaila on January 20, 2012 at 8:30am —7Comments
मृत्यूको बाटो बन्दैछन् नेपालका सडकहरु
सडकको यात्रा जोखिमपुर्ण हुन थालेपछि हिजोआज थोरै कमाइ हुनेहरु पनि जहाजबाटै यात्रा गर्न रुचाउँछन् । तर पनि आम नागरिक जो अभावमा पिल्सीएका छन् गन्तब्यमा पुग्नका लागि सडक यातायातकै सहारा लिन्छन् जुन हिजोआज जोखिमपुर्ण बन्दैछ । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर जहाजमा यात्रा गर्दा केही भइहाल्यो भने गठन हुने समिती र आयोग सडक यातायातको हकमा बन्दैनन् । यात्रुले क्षतिपुर्ति पाउँदैनन् । जोखिम जतातै छ र पनि आम नागरिकसँग बिकल्प छैन । सार्वजनिक यातायात जोखीमपुर्ण हुने धेरै कारणहरु मध्ये प्रमुख निम्न…
Added by Devi sapkota on January 19, 2012 at 11:00am — 11 Comments
सुचनाको हक र नागरिकको पहूँच
सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक महत्वका सुचनाहरु नागरिकलाई सजिलैसंग दिउन् र नागरिकले सजिलैसंग पाउन सकुन् भनेर नै नेपालमा पनि २०६४ सालदेखि सुचनाको हक सम्वन्धि ऐन लागु भयो । तर सुचनाको हक सम्बन्धि कानुन आइसकेको भएपनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत सुमित श्रीवास्तव आफुले माग्न गएको सुचना नपाएको कुरा यसरी बताउँछन-"डकुमेन्टको लागि म धेरै हस्पिटल गएको छु तर त्यहाँ राम्रो रेसपोन्स पाइरहेको हुँदैन । पहिलो कुरा त धेरै प्रश्न गर्छन र हाम्रो कुरा समेत…
Added by Kranti Darai on January 13, 2012 at 4:00pm — 8 Comments
अझ बढेर भन्नुपर्दा यसले राजनीतिक अभियानहरु गर्न र एक हदसम्म आन्दोलन नै अगाडी बढाउन समेत सघाएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण अरब राष्ट्रहरुमा भएका अन्दोलनमा स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । ट्युनिशिया र इजिप्टमा भएका आन्दोलनमा…
Added by Indra Dhoj Kshetri on January 13, 2012 at 10:00am —9Comments
Added by Prabin Baniya on January 11, 2012 at 9:00am — No Comments
Sino-Indian rivalry plays out in Nepal
For long Nepal has been dependent on India both politically and economically while maintainig stable relationship with China. The emerging realities of increasing Sino-Indian rivalry are making the balancing act of Nepal harder as the time passes.
While mocking the severe dependency of Nepal, particularly the politicians, to India and the Indian establishment, it is often joked that if it rains in Delhi, they open umbrella in Kathmandu. While people keep debating…
Added by Jiwan Kshetry on January 8, 2012 at 12:00pm — 1 Comment
पढ्दैमा अचम्म लाग्ने, खेतबारी पाठशाला । काभ्रे जिल्लाको पात्लेखेत गाविस–५ डाँडागाउँका विद्यार्थीहरुले कक्षा कोठाबाहेक खेत र बारीमा पनि सिक्दै छन् । कालीदेवी माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ७ का विद्यार्थीहरुले चलाउने गरेको यस पाठशालाको कक्षा हरेक शुक्रबार चल्छ ।
शनिबार भने फुर्सदिला विद्यार्थीहरु खेती किसानीका कुरा…
Added by MadhuSudhan Guragain on January 8, 2012 at 9:20am — 1 Comment
र, ऊ वनकाइँला भयो
अफ्ठेरो ठाउँमा आएको घाउजस्तै जीन्दगीका घाउहरू मनभरी बोकेर एक फकिर सहरको सडक नाप्दै थियो । कथाकार, जो फकिरको पिछा गरिरहेछ । आज एउटा सहरको कथा लेख्नुछ । भोलिको शनिवारीय विशेषङ्कमा कथा छाप्नुछ । कथा बेचेर आएको पैसाले चुरोट किन्ने खर्चसम्म धान्नुछ । …जीहरूले सहरमा चुरोटको पैसा पनि बढाइदिएका छन् । लेखेर बाँच्न कठिन छ सहरमा तर पनि कथाकार नलेखिरहन सक्दैन । लेख्नु उसको नसा हो ।
कथाकार अहिले पशुपति आर्यघाटमा कथाको खेती गर्दै छ । उसले पिछा गरिरहेको फकिर आरतीमा झुम्दै छ । अग्लो शरीर, सहर र…
Added by shiva gyawali Bankaila on January 7, 2012 at 6:30pm —3Comments
कहिले सुनुवाइ नहुने सिमावस्तीको आवाज
नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको विवाद नयाँ होइन । सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका लाखौँ नेपालीहरु भारतीय सुरक्षा बलका कर्मचारीहरुबाट बारम्बार धम्क्याइने, तर्साइने र विभिन्न किसिमका ज्यादतीको सिकार हुनुपरेका खबरहरुबाट सायदै कोही नेपाली अनभिज्ञ होलान् । खुला सिमाना र नदी पहाड जस्ता…
Added by Raman Paneru on January 5, 2012 at 8:00am — No Comments
वुढ्यौली उमेर, तन्नेरी जाँगर
मुखमा दाँत अव धेरै वाँकी छैनन । गालाका दारी कपासजस्तै फुल्न लागिसके । धेरैले भन्छन यो उमेर त धर्मकर्म गर्ने हो नी । के यस्तो मरिहत्ते गरेको । दोलखाको लाँकुरीडाँडा गाविसका नर वहादुर फँयाल ६९ वर्ष पूग्नुभयो ।
१० वर्ष अगाडी भूसंरक्षण कार्यालयको सहयोगमा अलैंची खेती सुरु गर्नुभएका उहाँले यस वर्ष १५० किलो अलैंची उत्पादन गर्नुभयो । यसवाट उहाँले झण्डै १ लाख पचास हजार रुपैंया आम्दानी गर्नुभयो । यसवाट उहाँ दंग हुनुहुन्छ । खाली रहेका ३ रोपनी जग्गामा उहाँले अलैंची खेती सुरु गर्नुभएको थियो…
Added by Arjun Apawad on January 5, 2012 at 7:00am —4Comments